Umphumela uvemvane: uyini, izici kanye nesiyaluyalu theory | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa noma wabona i-movie ye- umphumela wevemvane. Lo mphumela uza ngesaga saseChina esisho okulandelayo: "ukushaywa kwamaphiko uvemvane kungazwakala ngakolunye uhlangothi lomhlaba." Lokhu kusho ukuthi noma imininingwane emincane ingaholela kweminye imiphumela ehluke ngokuphelele. Noma yini esiyenzayo ingaba nomphumela omkhulu wesikhathi eside ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kungacaciswa kokubili ezingeni lemvelo nasezingeni lezenzo zomuntu nezenzo zethu zomuntu siqu.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi uyini umphumela wevemvane nokuthi yiziphi izici zayo eziyinhloko.
1 Uyini umphumela wovemvane
2 Izindawo zomphumela uvemvane
3 Umbono wesiphithiphithi
Uyini umphumela wovemvane
Umphumela wovemvane uxhunyaniswe nombono wesiphithiphithi. Lo mbono uthi ukuphephuka kwesinambuzane eHong Kong kungadala isiphepho sonke eNew York. Kuyindlela engeyona yokunquma enezinguquko ezincane ezingaholela emiphumeleni ehluke ngokuphelele. Ekuqaleni, kuqala ngokuphazamiseka okuncane. Ngenqubo yokukhulisa, lokhu kuphazamiseka okuncane kungadala umphumela omkhulu esikhathini esimaphakathi nesifushane.
Ukuhamba okungahambisani kahle kwezinkanyezi, ukuhamba kweplankton ezilwandle, ukubambezeleka kwezindiza, ukuvumelanisa kwama-neurons, njll. Zonke lezi zinhlelo ezixakile noma ezinamandla ezingekho emgqeni zingadala imiphumela ehlukile esikhathini esifushane noma esimaphakathi. Umbono wesiphithiphithi nomphumela wovemvane uchaza ukuthi into eyinkimbinkimbi njengendawo yonke ayinakulindeleka nakancane. Umkhathi uhlelo oluguquguqukayo lwesiphithiphithi. Chaos theory ichaza ukuthi umkhathi ngezimo ze Isimo sezulu sivimbela ukubikezela lapho isimo sezulu esithembekile singaphezu kwezinsuku ezintathu.
Umphumela wovemvane usetshenziselwa ukubhekana nezifundo ezenzakalweni zomphakathi okunzima ukuzixazulula ngokwezibangela ezihambisanayo nobudlelwano bomphumela. Kungashiwo ukuthi izinto ezincane zingaba nomthelela omkhulu ngokuhamba kwesikhathi. Uma sikuthatha ngokwezinga lomuntu siqu, siyabona ukuthi ukufakwa kwemikhuba eminingi empilweni yethu kungadala eminye imiphumela.
Izindawo zomphumela uvemvane
Umphumela wevemvane ungasetshenziswa ezindaweni eziningi. Kungasebenza njengesisekelo esiyinhloko emibhalweni ehlukahlukene yezincwadi noma kube yingxenye yemibono ehambisanayo kanye nezingqinamba zesayensi eziphikisanayo nezithandwayo ezinjengethiyori yenxushunxushu. Futhi ukuthi umphumela wovemvane ugcina uphawu olungasetshenziswa kumaqiniso ahlukahlukene.
Njengoba kunikezwe ukuthi isenzo esithile noma isimo esingaholela ochungechungeni lwezimo ezilandelanayo noma izenzo ezigcina zidale umphumela omkhulu lokho kubonakala kungahambisani nesimo sento eyiqalile. Njengoba kunikezwe ukuthi uma kuhlaziywa imbangela yokuqala nomphumela wokugcina, kungahle kungabi nokuhlangana okuningi phakathi kwabo. Kodwa-ke, isenzo esincane sokuqala yiso esiqale ukudala eminye imiphumela emincane kepha esibe nomthelela wokuqongelela ngokuhamba kwesikhathi. Le yindlela umphumela ngemuva komphumela ofinyelele ngayo kumphumela wokugcina.
Umqondo womphumela wevemvane waqala ngokuhlangenwe nakho kwesazi sezulu u-Edward Lorenz. Lolu hlobo lwesimo sezulu olubizwa ngokuthi umvemvane umphumela ngo-1973 ngenxa yokuthi akunakwenzeka ukukwazi ukwenza izibikezelo zesimo sezulu ezinokwethenjelwa ngokuphelele. Lokhu kungenxa yokuthi isenzo sezinhlobonhlobo ezahlukahlukene ezikwaziyo ukuguqula ukusebenza komkhathi ziyanqwabelana esimweni sezulu.
Lapho sikhuluma ngohlelo lwasemkhathini nokuthi kungenzeka kube nemvula, kufanele kuhlaziywe izinto eziningi eziguquguqukayo. Okuguqukayo okunenani elincike kokunye okuguqukayo okukhulunywa ngakho. Isibonelo, izinga lokushisa esifundeni lizoncika ekutheni imisebe yelanga ifika kanjani ivela emkhathini. Lokhu-ke, kuncike esikhathini senhlangano yokuhumusha lapho iplanethi yethu ihlobene nokuzungeza kwelanga. Ngakho-ke, amazinga okushisa awancikile kuphela kulokho esishilo, kepha nakwezinye izinto eziguquguqukayo njengokusebenza komoya, inani lamagesi abamba ukushisa emkhathini, umswakama ohlobene, njll.
Njengoba ukuguquguquka ngakunye kukodwa kuncike ngqo noma ngokungaqondile kokunye okuguqukayo, kwakheka uhlobo lwesiphithiphithi okunzima kakhulu ukubikezela ngemuva kwesikhathi esithile.
Konke lokhu kusichazela ukuthi ithiyori yezinxushunxushu ikhona kumthelela wovemvane. Futhi lokhu kusikhombisa ukuthi izinguquko ezibonakala zingaba lula ngokungabi nasici kokuguquguquka kwesenzo sikakhonkolo, zingathola ukudala imiphumela emikhulu. Ukuguquguquka kokuqala noma isenzo sokuqala yileso Idala inqubo eyenza konke okunye okuguqukayo kusabalalise imiphumela kuze kufinyelelwe umphumela wokugcina. Le nqubo ithola amandla amaningi ngokwengeziwe.
Kunjalo-ke lesi siphithiphithi okungumsuka wesisho esidumile esithi ukushaywa kovemvane eHong Kong kungadala isiphepho eNew York. Lokhu kusho ukuthi ushintsho oluncane kunqubo efanayo lungaholela emiphumeleni ehluke kakhulu futhi engalindelekile nhlobo. Umphumela wovemvane uvame ukubonwa njengesifaniso noma isifaniso esisetshenziswa njengenye yezinsika zethiyori yenxushunxushu. Umbono wezinxushunxushu nawo wasungulwa ngu-Edward Lorenz. Ngokwalo meteorologist endaweni yonke kunezinhlelo ezizwela kakhulu ebukhoneni bokwehlukahluka. Konke lokhu kwehlukahluka kungaletha imiphumela ehluke kakhulu kepha enomkhawulo, ngendlela exakile futhi engalindelekile.
Imodeli eyinhloko yethiyori yezinxushunxushu iphakamisa ukuthi lapho kubhekene imihlaba noma izimo ezimbili ezifanayo lapho kunokuhluka okukodwa futhi okungabalulekanga okukuhlukanisa komunye nomunye, ngokuhamba kwesikhathi nenqubekela phambili, kungavela omunye umehluko ozodala imihlaba iya ngokuya yehluka komunye nomunye. Lokho wukuthi, sizobeka isibonelo esilula. Sibeka amaplanethi amabili womhlaba anezimo ezifanayo kusukela adalwa, kepha elilodwa sibeka izinga lokushisa elingaphezu kwesilinganiso. Yize kungukuguquguquka okuncane, iqiniso lokuthi iplanethi eyodwa ineziqu ezimbalwa eziphakeme kunezinga lokushisa elijwayelekile komunye kungaba nesimo sokuthi, ezinkulungwaneni zeminyaka, impilo ingavela ngenye indlela.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomphumela wovemvane wezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Umphumela Wevemvane